Imijelo engena emanzini iBlacker, abavelisi baseChina abangaphantsi kwamanzi, abaXhobisi, abaFektri - NANTONG RONGHENG YOBUME BENDALO YOBUME., LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Ngaphantsi kwamanzi I-Blower
Uchungechunge lwe-UW phantsi kwamanzi I-blower blower sisizukulwana esitsha seemveliso ezinamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nelungelo lokuvelisa. Inamancedo amaninzi anjengokubonakala ngokugqibeleleyo, ubumbano lwendawo, akukho ngxolo, ixabiso eliphantsi, ulondolozo olulula, njl., Kwaye ilungiselelwe ngolawulo lwasekhaya okanye olukude
I-UW uthotho lwamanzi angaphantsi kwamanzi enzelwe ikakhulu abo bavuthuza ngokwesiko abafuna ukwakha amagumbi oomatshini, ukucwangcisa imibhobho emide, iindleko eziphezulu ngokubanzi, kufuneka ukuba babe kude neofisi kunye neendawo ezinabantu abaninzi, kwaye basebenzise amanzi amaninzi okupholisa kwiinkqubo ezinobushushu obuphezulu .
UW uthotho blower ngaphantsi kwamanzi isebenzisa ulwakhiwo semi-amanzi ugwebu oluhlangeneyo kunye motor lwangaphandle. Inkangeleko intle kwaye inesisa. Inokubekwa kwindawo ekufutshane necandelo lenkqubo. Akukho sidingo sokwakha igumbi le-blower kunye namaziko okunciphisa ingxolo. Inokunciphisa umbhobho wokuhambisa umoya kwaye igcine iindleko zeprojekthi.
Uyilo oluyingqayizivele loyilo lwe-UW uthotho lwamanzi aphantsi kwamanzi lususa ngokufanelekileyo ingxolo yokuhamba komoya kunye nengxolo yoomatshini ngexesha lokusebenza komntu obethayo. Ingasebenza kwimeko yokuthula cwaka, kwaye inokucwangciswa ngokuguqukayo kwiindawo ezineemfuno zengxolo ephezulu, ezinje ngaphakathi kumasifundisane, ezibhedlele, nakwiindawo zokuhlala.
I-UW uthotho lwamanzi angaphantsi kwamanzi afakwa emanzini ngexesha lokusebenza, ukuze umatshini uhambise umoya ohamba kakhulu obushushu, kwaye isixhobo esikrelekrele sokujikeleza amanzi sokupholisa singasusa ngokufanelekileyo ubushushu ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo komatshini wonke kubushushu obuqhelekileyo.
● Indlela yokuhambisa: ibhanti;
● Ukungena komoya kunye nendawo yokuphuma: ubume bokungeniswa komoya obungaphantsi kwamanzi, ukuzinza komoya;
● Ukupholisa: Umatshini wonke untywiliselwa emanzini ngesiphumo sokupholisa;
● Ubume bomzimba: uhlobo oluxineneyo;
Umgangatho wokuhamba: 0.6 ～ 120m³ / min;
Ising Ukunyusa uxinzelelo: 9.8 ～ 98kPa;
Resistance Ubushushu obukhulu ukumelana: 500 ℃;
Amanqaku: Nceda unxibelelane nenkampani yethu kwangaphambili ngeemeko ezintsonkothileyo zokusebenza ezinjengokuphakama okuphezulu, ukusebenza kwamaxesha asezantsi, ukuthuthwa kwegesi exineneyo (helium)
★ Iyasebenza: Imveliso ilungele ngokukodwa imeko-bume enolawulo lwengxolo ephezulu, okanye ukuhambisa irhasi ekhethekileyo enamanzi kunye negesi ephezulu.